श्वास फेर्न नै गाह्रो भएका कारण नेकपाकि सचेतक शान्ता चाैधरी आइसियुमा, गरिन् यस्तो आग्रह! – PathivaraOnline
Home > समाचार > श्वास फेर्न नै गाह्रो भएका कारण नेकपाकि सचेतक शान्ता चाैधरी आइसियुमा, गरिन् यस्तो आग्रह!
काठमाडौं । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले कोरोनाका कारण आफ्नो स्वास्थ्य थप समस्या उत्पन्न भएको बताएकी छिन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेपछि अस्पताल भर्ना भएर उपचार सुरु गरेकी चौधरीले आँफुलाई श्वास फेर्न नै गाह्रो भएका कारण फोन उठाउन समेत समस्या भएको र बोल्न नसकेका कारण फोन नगरी म्यासेज मात्र गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
त्यसैले कृपया मलाई फोन गर्नुको साटो म्यासेज गरिदिनुहोला । अस्पतालको बेडमा अक्सिजन लिइरहेको तस्विरसमेत पोष्ट गरेकी शान्ताले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप जानकारी फेसबुकमा नै गराइरहने उल्लेख गरेकी छिन् ।
विमला दिदीको चिया पसल : रोडबाट सुरु गरेको चिया पसलले करोडमा पुर्याए (भिडियो सहित)